Gearbox ကတ်တလောက် PDF ဖိုင်
helical စက်မှုဂီယာအုံ၏ catalog ကိုရှာပါ
Helical နှင့် Bevel-Helical Gear ယူနစ်များ
အဆိုပါ helical နှင့် bevel-helical ဂီယာယူနစ်အစုစုကိုဝေးအားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာစက်မှုဂီယာယူနစ်၏အများဆုံးပြည့်စုံသောအကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ ရိုး - တပ်ဆင်ထား helical ဂီယာအုံ, ဂီယာအံသွားများ၏အကောင်းဆုံးဂျီသြမေတြီသည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
စီးရီး H ကို helical စက်မှုဂီယာအုံ
Radicon ၏ Series H စက်မှုဂီယာအုံတစ်ခုလုံးနှင့်တိုင်ပင်ပါ. စီးရီး, G helical အပြိုင်ရိုးတံ & bevel helical ညာဘက်ထောင့် drive ကိုဂီယာယူနစ်. ဤနေရာတွင်နှင့်အခြားမော်ဒယ်များရလဒ်များကိုအတွက်အကောင်းဆုံးဂီယာဂျီသြမေတြီရလဒ်။
Crusher conveyor gearbox သည် helical gear reducer ဖြစ်သည်
ဤစာမျက်နှာတွင်မြင့်မားသော torque ရှိ Elecon Helical နှင့် helical bevel စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးဂီယာအုံများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များပါ ၀ င်ပြီးအစွန်းရောက်အခြေအနေများတွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်ပါသည်။
PDF ကို Catalog Download
DCY စီးရီးဆလင်ဒါဂီယာအုံ၏ catalog ကိုရှာပါ
Dy စီးရီး Bevel Helical ဆလင်ဒါ Gearbox
တရုတ် Dy စီးရီး Bevel Helical Cylindrical Gearbox (DCY ပါ), တရုတ် Gearbox, Dy Series Bevel Helical Cylindrical Gearbox မှ Gear Box အကြောင်းအသေးစိတ်ရှာဖွေပါ။
DBY / DCY ဆလင်ဒါဂီယာလျှော့ချ
Injection မှိုစက်အတွက်ဂီယာအုံ၊ ပြောင်းပြန်ဂီယာအုံ၊ ဂီယာလျှော့ချရေး box၊ bevel လျှော့ချရေး box၊ grinding လျှော့ချရေးယူနစ်၊ motor gearbox ၎င်းတို့အနက် ၁၅% သည် Speed ​​Reducers ဖြစ်ပြီး ၁၀% သည် Gearboxes ဖြစ်သည်။
Helical Bevel Gearbox Cylindrical Gear Reducer ဖြစ်သည်
အရည်အသွေး Helical Bevel Gearbox Cylindrical Gear Reducer DCY Series 23KW - 1850KW - စျေးပေါသော Helical Bevel Gearbox Cylindrical Gear Reducer ကိုဝယ်ပါ။ DFY စီးရီးဂီယာအပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ စက်ရုံ၏ဒေါင်လိုက်လျှော့ချစက်ကိုဂီယာအုံထုတ်လုပ်သူများ။
စက်မှုဂြိုဟ်ဂီယာအုံ၏ catalog ကိုရှာပါ
လက်စွဲဂီယာအုံအသုံးချပရိုဂရမ်များပေါ်တွင်သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝယ်ယူမှုနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ချိန်အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ။ Orbi-fleX ဂြိုလ်ဂီယာအုံ၏ ၂၂ အရွယ်သည်စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းသေဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
Catalog Planetary စက်မှုဂီယာယူနစ်စီးရီး
စက်မှုဆိုင်ရာ Planetary Gearbox S Series Brevini Motion Systems ။ နည်းပညာဆိုင်ရာ catalog - S Series ·လက်စွဲ - Industrial နှင့် Slewing ။ Brevini ရွေ့လျားစနစ်များမှ E စီးရီးစက်မှုဆိုင်ရာ Planetary Gearboxes ။
စက်မှု - ဂြိုဟ်ဂီယာအုံများသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောစွမ်းအားများဖြစ်သည်
ZSY ZDY ZFY ZLY စီးရီးစာရင်းကိုရှာပါ
ZSY ZDY ZFY ZLY စီးရီးစက်မှုဂီယာအုံ
Zsy စီးရီး Hard သွားမျက်နှာပြင်ဂီယာ Reducer ၏ ZDY \_ ZLY \_ ZSY \_ ZFY စီးရီးဂီယာအုံ catalog ။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောစက်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်းလျှော့ချခြင်း၊ ဂီယာလျှော့ချခြင်း၊
ZDY Single-stage ဆလင်ဒါဂီယာမြန်နှုန်းလျော့
ZDY, ZLY, ZSY, ZFY Series Parallel Shaft Gearboxes များတွင်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုအနေဖြင့်တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်နှစ်ဆထည့်သွင်းခြင်းနှင့် output shaft တစ်ခုစီသို့မဟုတ်နှစ်ဖက်တွင်ရိုးတံပုံစံမျိုးစုံရှိသည်။
ZLY, ZSY, ZFY စီးရီးစက်မှုလျှော့ချမြန်နှုန်းဂီယာအုံ
ZDY, ZLY, ZSY ZFY စီးရီး Cylindrical Parallel Shaft Gear Reducer ။ ZDY / ZLY / ZSY / ZFY ဆလင်ဒါဂီယာလျှော့ချခြင်း။ ZY စီးရီးဆလင်ဒါဂီယာလျှော့ချခြင်းကိုသတ္တု၊ သတ္တုတွင်း၊
နောက်ထပ်ကတ်တလောက်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ